जापानी आकाशमा अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त ! [पुर्ण विवरण आउँन बाँकि]
टोकियो । जापानको दक्षिणपश्चिमी तटीय क्षेत्रमा दुईवटा अमेरिकी लडाकू बिमान बिहीबार आकाशमा जुधेर दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । सैनिक अधिकारीहरुले बिमानमा सबार चालक दलका सात जनामध्ये पाँचजना हराइरहेको बताएका छन् । आकाशमा एउटा लडाकू बिमानमा अर्को सैनिक बिमानबाट तेल भर्ने क्रममा दुबै बिमान एकआपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटनाग्रस्त भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरुले उक्त दुर्घटना सैनिक अखडाबाट करिब ३२० किलोमिटर टाढा प्रशान्त महासागरमा भएको थियो । तत्काल खोजी तथा उद्धारमा खटिएका सैनिकहरुले चालक दलका दुई सदस्यलाई उद्धार गरेको थियो । उक्त दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान शुरु भइसकेको छ । खोजी र उद्धारमा जापानी सैनिक बिमान र पानी जहाजहरु पनि परिचालन गरिएको जापानी सैनिक अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पछिल्ला केही समयदेखि जापानी तटीय इलाकामा अमेरिकी लडाकू बिमान र नौसैनिक जहाजहरुको दुर्घटना हुनेक्रम बढेको छ । गत महिना पनि एउटा अमेरिकी नेभीको लडाकू बिमान ओकिनावा नजिक दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । गत अक्टोबरमा एउटा एमएच–६० सि–हक लडाकू बिमान पनि फिलिपिनी सागरमा उड्नासाथ दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । जापान र अमेरिकाबीचको सुरक्षा सम्झौता बमोजिम जापानमा हाल ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्
प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या प्रकरणः न प्रेमी न श्रीमान, दुवै जेल
टीकापुरमा एक युवती मृत फेला
अमरगढीका ३ सय ६६ बालबालिका विद्यालय बाहिर
महोत्तरीमा बलात्कारका आरोपीलाई उन्मुक्ति, यस्तो थियो घटना
साधारण किसान की छोरी जो “हाइस्कुल पढी यो झुपडीमाहुर्की १५ हजार प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै एमबीबीएसमा नाम निकालिन यिनै प्रतिमाले”
पशु चिकित्सकको सुझाव : दशैँमा कस्तो खसी किन्ने ?
प्रदेश कर्मचारीको गुनासो- डेराभाडा तिर्ने पैसा छैन, दसैं कसरी मनाउने
एप्पल गाउँ’मा सामसुङले किन बाँड्यो ग्यालेक्सी एस नाइन ?
डा. केसीको समर्थनमा आवासीय चिकित्सकको र्‍याली
ट्याक्टरको ठक्करबाट ओखलढुंगामा एकको मृत्यु
जिल्ला सभापतिहरुलाई देउवाले धन्यवादसमेत दिएनन्
गाडी गुडाएरै बैंकक जान बिमस्टेकले बाटो खोल्ला ?
दुःखद खबर, शिक्षकले दिएको यातनाले कक्षा ७ कि छात्राले गरिन् आत्महत्या [हार्दिक श्रदाञ्जली]
स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा रुटिन प्रकाशित [तालिकासहित]